PressReader - Isolezwe ngeSonto: 2017-09-03 - Zitheleke ngobuningi bazo izintombi nto
Zitheleke ngobuningi bazo izintombi nto
Isolezwe ngeSonto - 2017-09-03 - IZINDABA - KHETHA SANGWENI
BEZIPHUME ngothi lwazo izintombi nto, ziyohlolwa eNkandla njengoba kulungiselelwa uMkhosi woMhlanga ozokuba kule mpelasonto eSigodlweni seSilo eNyokeni KwaNongoma.
Izolo bekunomcimbi obizwa ngokuthi i-Operation Siyaya eMhlangeni obuseNkandla Indoor Sports Centre.
IMeya kaMasipala waseNkandla uMnuz Thamsanqa Ntuli, inxuse abezinhlaka ezilwela amalungelo abantu ukuba zihlukane nomkhuba wokugxeka ukuhlolwa kwezintombi kodwa bazihluphe ngokufunda kabanzi nangalo baleseke.
“Siyanxusa ukuthi wonke umuntu aqhubeke nokweseka leli siko lethu,’’ kusho uNtuli obehola lo mviliyelo obudabula edolobheni iNkandla.
Inkosi uMbangiseni Dlomo ebizimazise lo mcimbi ithe: “Kufanele abazali banzele izingane imicimbi efana nomemulo, ukuzichoma uphaphe lwegwalagwala ngemisebenzi emihle eziyenzayo ukuze zikhuthale zingapheli amandla ohambweni lazo,’’ kusho Inkosi uDlomo.
Enye yezintombi ebiviliyela kulo mcimbi uKusaselihle Xulu (17) ithe, isimagange ukuyokwethula umhlanga phambi koNgangezwe Lakhe.
“Njengoba ngihamba umhlanga, ngenzela abazali bami ukuthi beziqhenye ngami nami ngibe nekusasa eliqhakazile ngingadlali abafana,’’ kusho leli tshitshi.
Abantu baseNkandla bebephume ngobuningi babo bezokweseka lezi zintombi ebezingaphezulu kwenkulungwane.
Izinhlelo zoMkhosi woMhlanga zizoqala ngoLwesihlanu uze ugoqwe ngeSonto. Kulindeleke izinkulungwane zezintombi ukuba zitheleke esigodlweni eNyokeni KwaNongoma.
Khonamanjalo iMeya kaMasipala wesiFunda iZululand, iNkosi uMzamo Buthelezi ithe, sezimi ngomumo izinhlelo zabo zokwamukela izinkulungwane zamatshitshi azohambela uMkhosi woMhlanga.
Inkosi ithe likhulu iqhaza elibanjwe ngumkhandlu wayo njengoba kumele wenze isiqiniseko sokuthi amaloli amanzi anele ukubhekana nezinkulungwane zezintombi. Uthe bayaqinisekisa ukuthi izinsiza zezimo
eziphuthumayo zimi ngomumo ukubhekana nesibhicongo esingaqahamuka ngesikhathi kuqhubeka umcimbi.
“Ziningi izinhlaka zikahulumeni ezithintekayo uma kulungiselelwa uMkhosi woMhlanga, kodwa yithina njengomkhandlu wesifunda okubhekeke ukuba sibambe iqhaza elibonakalayo. Umsebenzi wethu umsebenzi uthinta izinto ezibucayi okuwuqinisekisa amanzi anele emcimbini nezinsiza ezibhekene nezimo eziphuthumayo. Ngaphandle kwalokhu kunemali esiyifakayo kulo mcimbi,” kuchaza imeya.
Inkosi Buthelezi uthe lo mcimbi ukhulisa ezokuvakasha, umnotho nokudala namathuba emisebenzi, kuhlomula nabezindawo zokulala.
ZIYINKULUNGWANE izintombi nto ebezihambele umviliyelo wokuzigqugquzela ukuthi ziye eMkhosini woMhlanga ngempelasonto. Umviliyelo ubuseNkandla Indoor Sports Centre izolo